Dumarka oo qirtay in ay been ka sheegaan biyo-baxa | Raganimo University
Dumarka oo qirtay in ay been ka sheegaan biyo-baxa
October 15, 2019~1 minute
Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in 80% dumarku ay been ka sheegaan in ay biyo-bexeen. Baaritaanka oo ay sameeyeen khuburo ka tirsan jaamacad ku taala mareykanka ayaa lagu weydiiyay dumar da'dooda u dhaxayso 18-48 in ay waligood been ka sheegeen biyo-baxooda, iyadoo intooda badan ay ku jawaabeen haa.
Dumarka ayaa qirtay in ay sameeyaan dhawaqyo muujinayo in ay biyo-baxayso sida sawaxan iwm balse waxay sheegeen in dhawaqyadaas aysan u sameyn galmada oo u macaanaatay ama in uu kontoroolkii ka lumay biyo-baxa darteed balse ay u sameeyeen si ay ugu qanciyaan ninkooda in ay biyo-baxday oo uu hawsha soo gabagabeeyo.
Dumarka ayaa sheegay sababtu in ay tahay in haddii galmadu dheeraato oo uu xiisaha ka dhaco in ay dareemayaan xanuun, ama waqtigu ku yaryahay ama qaarkood laga yaabo in aysan markii horeba dareen culus qaban balse uu ninku ku qasbay in ay hawsha la wado. Sidaa daraadeed ayay cabaad been abuur ah iyo dareen la mid ah sameeyaan si ninku uu isku yiraahdo caawa gabadhii waxbaad ku dhigtay oo uu seexdo isaga oo faraxsan.
Ragg badan ayaa aaminsan haddii aysan naagtu ka dhawaajin in aysan miro dhal ahayn galmada, balse dumarku waa kuwo u baahan hawl qoto dheer oo aan keliya ahayn guska. Dumarka inta badan waxay sheegeen in wadada ugu fudud ee ay ku biyo-bixi karaan ay tahay baashaalka kale sida taabashada, faraha, leefida carabka iyo iwm.
Hadaba ragoow waxaa muhiim ah in aad u nuglaataan sidii aad gabdhaha u gaarsiin lahaydeen in ay u biyo-baxaan si dhab ah oo aad sameysaan dadaal dheeraad ah oo dhaafsan xubnaha taranka oo keliya.